Hitady Zavatra Misy Amin’ny Fiteny Hafa | Fanampiana JW.ORG
Hikaroka Lahatsoratra na Video ao Amin’ny JW.ORG
Hitady Zavatra Misy Amin’ny Fiteny Hafa
Fijerena ny JW.ORG Amin’ny Fitaovana Entin-tanana
Fampiasana ny Mihirà Amin’ny Fo ho An’i Jehovah
Ampiasao ny Mihirà Amin’ny Fo ho An’i Jehovah ao Amin’ny JW.ORG
Fanontaniana Fametraky ny Olona: JW.ORG
Raha mianatra teny vahiny ianao, na te hanome fanazavana avy ato amin’ny jw.org ho an’olona miteny vahiny, dia araho ny iray amin’ireto toromarika telo ireto mba hahitana fanazavana amin’ilay teny vahiny:
Hanova ny fiteny ao amin’ilay tranonkala
Hamaky lahatsoratra amin’ny fiteny hafa
Hitady boky na gazety amin’ny fiteny hafa
Tsindrio ilay Fifidianana Fiteny mba hahitana ny lisitry ny fiteny rehetra ampiasaina ato amin’ny jw.org.
Misy ny iray amin’ireto sary kely ireto eo ankavian’ny fiteny tsirairay ao amin’ilay lisitra:
Voadika amin’ilay fiteny ity tranonkala ity na ny ampahany aminy. Fidio ilay fiteny raha tianao hojerena amin’io fiteny io ny jw.org.
Mbola tsy voadika amin’ilay fiteny ity tranonkala ity, nefa misy boky na zavatra hafa azo alaina amin’io fiteny io ao. Fidio ilay fiteny mba hahitana ny lisitry ny zavatra azo alaina amin’io fiteny io.
Tenin’ny tanana ilay fiteny.
Raha efa voadika amin’ilay tenin’ny tanana fidinao ny ampahany amin’ny jw.org, dia ho azonao jerena amin’io fiteny io ity tranonkala ity.
Raha mbola tsy voadika amin’ilay tenin’ny tanana ny jw.org, dia ho hitanao ny lisitry ny boky na zavatra hafa misy amin’io fiteny io.
Misy fiteny an-jatony ao amin’ilay lisitra, ka tsara kokoa raha arahinao ny iray amin’ireto hevitra ireto mba hahitana haingana ny fiteny tadiavinao:
Fidio izay fiteny hampiasainao matetika: Miseho eo amin’ny farany ambony amin’ilay lisitra ireo fiteny efatra nofidinao farany.
Soraty ny anaran’ilay fiteny: Soraty amin’ny fiteninao na amin’ilay fiteny ny litera vitsivitsy amin’ny anaran’ilay fiteny. Raha amin’ny teny malagasy, ohatra, ilay tranonkala, ka tianao hovana ho teny anglisy, dia soraty ny hoe “Anglisy” na “English.” Rehefa eo am-panoratana an’ilay fiteny ianao, dia hihena tsikelikely ny lisitr’ireo fiteny mba hifanitsy amin’izay soratanao.
Soso-kevitra 1: Araho ity soso-kevitra ity raha misy an’ilay hoe Hamaky Amin’ny Teny ny pejy sokafanao.
Mankanesa any amin’ilay lahatsoratra tianao hovakina na tianao haseho olona. Aorian’izay, dia mifidiana fiteny iray ao amin’ilay lisitra, ao amin’ilay hoe Hamaky Amin’ny Teny. (Raha tsy ao amin’ilay lisitra ny fiteny tadiavinao, dia midika izany fa mbola tsy nadika tamin’io fiteny io ilay lahatsoratra.)
Torohevitra: Misy sary kely eo ankavian’ny anaran’ny fiteny sasany ao amin’ilay lisitra mba hilazana fa noraisim-peo tamin’io fiteny io ilay lahatsoratra ary azo henoina.
Rehefa mifidy fiteny ao amin’io lisitra io ianao, dia ilay lahatsoratra ihany no hiova amin’ilay fiteny. Hijanona amin’ny fiteny nijerenao azy kosa ilay tranonkala.
Soso-kevitra 2: Raha tsy misy an’ilay hoe Hamaky Amin’ny Teny eo amin’ilay lahatsoratra, dia ampiasao ilay Fifidianana Fiteny mba hanovana ny fitenin’ilay tranonkala. Raha voadika amin’io fiteny io ilay lahatsoratra dia hiseho. Raha mbola tsy voadika kosa ilay izy, dia ny pejy fandraisana no hiseho.
Midira ao amin’ilay hoe ZAVATRA MISY > ZAVATRA ASEHO. Mifidiana fiteny ao amin’ilay hoe Asehoy ary tsindrio ny Hikaroka.
Ataovy ny iray amin’ireto mba hahitana fiteny iray haingana kokoa:
Boky sy gazety ary rakitra vitsivitsy ihany no hita ao amin’ny ZAVATRA ASEHO, na dia be dia be aza ny zavatra efa misy amin’ilay fiteny. Raha mitady zavatra hafa amin’io fiteny io àry ianao, dia midira ao amin’ny iray amin’ireo karazan-javatra misy (ohatra: BOKY & BOKIKELY na GAZETY) mba hahitana ny zavatra misy amin’ilay fiteny.
Raha tsy misy amin’ilay fiteny nofidinao ilay karazan-javatra tadiavinao, dia homeny ny rohy mankany amin’izay zavatra misy amin’ilay fiteny.